အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ "အယောင်ဆောင်ကပ်ပါလာတဲ့ သရဲမ" - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပရလောကအကြောင်း / အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ "အယောင်ဆောင်ကပ်ပါလာတဲ့ သရဲမ"
အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ "အယောင်ဆောင်ကပ်ပါလာတဲ့ သရဲမ"
Apann Pyay 6:24 PM ထူးဆန်းထွေလာ , ပရလောကအကြောင်း Edit
လူမရောက်သေး စကားသံအရင်ကြားလို့ ထိုင်ပြီအားကစားဂျာနယ်ဖတ်နေရာကနေတစ်ချက်မော့ကြည့်ကာ စာရွက်တစ်ရွက်ထိုးပေးလိုက်တယ်..
“ဟေ့ကောင် လာတာနဲ့ပေါက်ကရမပြောနဲ့ စာရွက်ကိုကြည့်ခိုင်တာ..”
“မပြောလို့ရမလား မင်းက အညှီအဟောက်ဆို နွားမဒန်မှရူးရူးပေါက်သလိုပြောချင်နေတဲ့ကောင်ကို..”
တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဘော်ဒါတွေရဲ့ ညနေခင်း လက်ဖတ်ရည်ဆိုင်ပန်ချီးကာလေးသည် အသက်ဝင်လို့နေ၏…
အော်သံဟစ်သံ ဆူညံသံများကြောင့် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲ ကားတိုက်သည့်နေရာကိုအပြေးရောက်သွာကြတယ်…
“မင်းကလဲ မျက်နှာကြီးဒီလောက်ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတာ တနှာကထချင်နေသေး…”
ဒီကောင်ပြောလဲပြောချင်စရာ မျက်နှာကရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေသောလဲ လှပတဲ့ အကွေးအညွှန့်များနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ သူမခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ လှတပတ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်သိနိုင်၏..
လူကြီးတစ်ယောက်အော်သံကြောင့် အားနေဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေတိတ်သွားတယ်…
သွေးအိုင်ထဲတွင်လဲနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ရင် သနားဂရုနာသက်နေကြသလို ကားကိုသောက်ရမ်းမောင်းတဲ့ တကောင့်သားကိုတော့ မေတ္တာတွေအတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဝိုင်းပို့ကျလေ၏…
“ဟိုမှ ရဲတွေရောက်လာပြီ..သွားမထိကျနဲ့ ဘေးဖယ်နေကြ….”
ရဲတွေရောက်လာပြီ ရဲလုပ်ငန်းလုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီ ဆေးရုံကားနဲ့ အလောင်းကို ဆေးရုံသယ်သွားတဲ့အချိန်ထိ လူတွေကမစဲသေးပဲ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပွစိပွစိနဲပြောလိုမဆုံးသေး..ကျွန်တော်တို့လဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆက်မထိုင်ချင်တော့တာနဲ့ လမ်းခွဲပြီ အိမ်ပြန်လာလိုက်ကြတယ်…သတိတချက်အလွတ်မှာ လူသားတစ်ဦး ဘဝစတေသွားခဲ့ရပြီကော….
“ဒီလိုလေကွာ ဟိုတစ်လောကဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့နေရာမှ သရဲခြောက်လို့တဲ့…”
“ဟုတ်တယ်…ညဘတ်ဆို ကောင်မလေးတစ်ယောက် အဲ့ဒီနေရာနားမှ လမ်းလျှောက်လျှောက်နေတာ တစ်ချို့လူတွေတွေ့တယ်တဲ့…”
“ငါပြောတာမဆုံးသေးဘူးလေကွာ..တွေ့တော့ တစ်ချို့က ညငှက်ထင်ပြီးသွားခေါ်တော့ စုတ်ပြတ်သက်နေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ လှည့်လှည့်ကြည့်တယ်တဲ့…”
“ဟ..မင်းနေတဲ့နေရာကနေ ဒီလက်ဘတ်ရည်ဆိုင်ကို အဲ့နေရာကနေဖြတ်လာမှရတာလေကွာ…”
ဆက်ထိုင်ချင်စိတ်မရှိတာနဲ့ ဘော်ဒါတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီ အိမ်ကိုစောစောပြန်လာလိုက်တယ်…အိပ်တော့လဲ မျက်လုံးထဲမှာ ဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရောင်နေမိတယ်…
“ခဏနေလာမှပေါ့..ဟော့ပြောရင်ဆိုရင် လာပါပြီ..နောက်မှလဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တင်လို့ပါလာ..ဘယ်တုန်းကဆော်ရသွားတာလဲမသိဘူး..”
တကောင့်သားကဒီကိုတည်တည်မလာပဲ လက်ဘတ်ရည်ဆိုင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးက ကွမ်းယာဆိုင်မှာကွမ်းကဝင်ဝယ်နေသေး….
လက်ဖတ်ရည် ကျစ်ိမ့်ကိုမော့ပြီ ဆေးပေါ့လိမ်ဖွာကာ ဖတ်လက်စစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဆက်ဖတ်နေလိုက်တယ်…
“နေညိုတာနဲ့ လေပျို့တာမို့ ငါကိုယ်တော် ရွှေရည် နည်းနည်းကစ်လာတာပါ..ဟဲ…ဟဲ..”
“ဘယ်ကကောင်မလေးလဲ မပါ ပါဘူးကွ.ငါတစ်ယောက်တည်းလာတာပါ…”
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာလာဆိုပြီ ကျန်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တော့ သူတို့မျက်နှာတွေမှာ မမေးပဲ ကျွန်တော့လိုပဲခံစားနေရတာသိသာနေတယ်…
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စကားလဲမပြောဘူး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့..ကိုယ့်ဆရာကတော့ တစ်ယောက်တည်းလွှတ်နေတာ…
ပြောပြီပြန်သွားတဲ့ ဒီကောင့်ကိုကြည့်ပြီးသက်ပြင်းချမိတယ်…တစ်ခုသတိထားမိတာက ဒီကောင်ပြန်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းလေးက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲ…
မိုးလင်းမယ်ကာမကြံသေးဘူး ခေါ်သံကြောင့် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့..
“ဘာလဲ သူရ ရာအစောကြီးရှိသေးတယ်…”
“အစောကြီးတွေဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ စံလင်းနိုင်တို့ အိမ်ကိုသွားမယ်..”
“ငါလဲသေခြာမသိဘူး.သူ့အဖေကတော့ မနက်အစောကြီးပယောဂဆရာသွားပင့်တယ်တဲ့..သူအမေက ငါတိုိ့ကိုလာခဲ့ပါဦးဆိုပြီ ဖုန်းဆက်လို့…”
ကျွန်တော်လဲ မျက်နှာသစ် အဝတ်အစာလဲပြီ အဒေါ်ကိုပြော၍ သူရ နဲ့လိုက်လာလိုက်တယ်…
“အဒေါ် စံလင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ..”
“မသိပါဘူး သားတို့ရယ်…တစ်ညလုံး ဘာတွေပြောမှန်လဲမသိဘူး ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့..”
“ပရိတ်ရေတိုက်ထားတော့ နည်းနည်းငြိမ်နေတယ် သွားကြည့်လိုက်ပါဦးသားတို့သူငယ်ချင်းကို သူ့အခန်းထဲမှာ..”
ပြောပြီ စံလင်း အခန်းထဲကိုသွားကြည့်လိုကတော့ ကိုယ့်ဆရာက အလွန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ အခန်းဒေါင့်မှ ငုတ်တုတ်လေး..မျက်လုံးလေးကလဲ ကလည်ကလည်နဲ့…စိတ်နဲ့လူနဲ့လဲကပ်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူး..
“စံလင်း ဘာဖြစ်တာ ငါတို့ကိုပြော..”
“ဘာဖြစ်တာလဲ မင်းပြောမှ ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမယ်မှန်သိမှာပေါ့..”
“ငါ…ညက မင်းတို့ဆီမလာ….ခင် လမ်းထိပ်ကဆိုင်မှာ အရက်ဝင်သောက်တယ်…..ပြီး…ပြီး…တော့…”
“ပြီးတော့ မင်းတို့ဆီလာရင် ဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရော ဟိုနေ့ကမင်းတို့ပြောတာသတိရလို့ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီ ဒီမှရှိတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်သရဲမလေး ပျင်းနေရင်ကိုယ်နဲ့လိုက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်….”
“ငါလဲအယုံအကြည်ကလဲမရှိ မူးကလဲမူးနေတော့ခေါ်ခဲ့လိုက်မိတာ..ငါခေါ်တဲ့စကားလဲဆုံးရော ငါ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကိုလူတစ်ယောက်တက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ
ငါသိလိုက်တယ်.ဒါပေမဲ့ အမူမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေပြီ မင်းတို့ဆီလာခဲ့တာ…”
“ဒါဆို ငါတို့မနေ့ညက မင်းဆိုင်ကယ်နောက်မှတွေလိုက်တာက…”
“အဲ့အထိ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး..ငါအိမ်ပြန်လာတော့ လမ်းမှခွေးတွေက ငါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုထိုးအောင်တာ..ငါ့စိတ်ထဲမှာလဲ ဆိုင်ကယ်နောက်မှတစ်ခုခုပါလာတယ်ဆိုတာသိတယ်..ဘာလုပ်ရမယ်မှန်မသိလို့ဒီအတိုင်ပြန်လာပြီ အိပ်နေလိုက်တာ..ငါ….ကို အဲ့သရဲမက လည်ပင်ညစ်တော့တာပဲ…
ရုပ်ကြီးကလဲ ဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့နေကအတိုင်ပဲ သွေးတွေနဲ့ ဆံပင်တွေကလဲ ဖရိုဖရဲနဲ့ကွာ….ငါ့အော်သံကြားလို့ အမေရောက်လာပြီ ပရိတ်ရေနဲ့ ပတ်လိုက်မှာပျောက်သွားတာ…”
“သူ…သူ….ရှိနေတယ် ဒီအခန်းထဲမှာ ငါသိနေတယ်…တစ်ချက်တစ်ချက်ငါမြင်နေရတယ်….ဆံပင်ဖားလျှာနဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကြီး…သွေးတွေသံတွေနဲ့..မျက်လုံးတစ်လုံးကအပြင်ကိုထွက်နေတယ်
ကျွန်တော်တို့လဲဘာလုပ်ရမယ်မှန်မသိ..စံလင်းကအခန်းထဲမှာသရဲမရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်နဲ့ သူရ ကြက်သီးတွေထပြီး ရှိရှိသမျှအမွှေးတွေပါအကုန်ထောင်ကုန်တယ်..နောက်ခဏလောက်နေတော့ စံလင်းအဖေနဲ့ ပရောဂဆရာရောက်လာပြီ လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီ သရဲမကိုစခေါ်တော့တာပဲ…
“ဥုံ…………………..ငါဆရာအမိန့်နာခံ ဒီအိမ်မှာ နှောင့်ယှက်နေတဲ့ သရဲမ ခုငါ့ဆရာရှေ့ ထွက်ခဲ့…..”
အိမ်အပြင်မှာကော ခြံအပြင်မှာပါ လူတွေကလဲ ဘာဖြစ်သလဲဆိုပြီ ဝိုင်းပြီးစပ်စုနေကြတာကြိတ်ကြိတ်တိုး….
လူကြားထဲမှာကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ သရဲမဝင်ပူးပါလေရော…
“ဟိတ် …သရဲမ ငါဆရာအမိန့်နာခံစမ်း.. နင်ဘယ်သူလဲ..ဘယ်ကလဲ..ဟိုတစ်လောကဆိုင်ကတိုက်သေတဲ့ကောင်မလေးလာ…”
“သြော်..နင်က အယောင်ဆောင်ပြီး ခြောက်လှန့်နေတာပေါ့..ခုပြန်ကိုယ်နေတဲ့နေရာကိုယ်ပြန်…”
ပြောပြောဆိုဆို ပရောဂဆရာက ကြိမ်လုံးနဲ့ဆော်တော့တာပါပဲ..သရဲမတော့မသိဘူး…ဘေးနားကကြည့်နေတဲ့သူတွေတောင် ကောကောသွာတယ်
ပြောပြီ ဖယောင်တိုင်းတစ်တိုင်ကိုကိုင်ကာ ဘာတွေရွတ်ဘာတွေမန်းနေလဲမသိဘူး.ပြီတော့ ဖယောင်တိုင်ကိုထွန်းတော့တာပဲ..ဖယောင်တိုင်ထွန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်..
“နင်ကကောင်းကောင်းပြောလို့မှမရတ..ငါ့မိန့်ကို နာခံပြီ ငါပြောတာလုပ်ရင်လွှတ်ပေးမယ်…”
“ဒါဆိုခုနင်ဝင်နေတဲ့ ကောင်မလေးကနေခွါပြီ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန် ဒီအိမ်ကိုလဲလုံးဝအနှောင့်အယှက်မပေးနဲ့…ကိုယ်နေတဲ့နေရာမှလဲ အနှောင့်အယှက်မပေးနဲ့ ကြားလာ…”
ပရောဂဆရာလဲ သရဲမဂတိပေးတော့ လုပ်စရာရှိတာပြောစရာရှိတာပြောပြီ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်..နောက်တော့အဲ့အိမ်မှာကော ဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့နားမှပါ သရဲမခြောက်တော့ပါဘူး…
လူမရောကျသေး စကားသံအရငျကွားလို့ ထိုငျပွီအားကစားဂြာနယျဖတျနရောကနတေဈခကျြမော့ကွညျ့ကာ စာရှကျတဈရှကျထိုးပေးလိုကျတယျ..
“ဟကေ့ောငျ လာတာနဲ့ပေါကျကရမပွောနဲ့ စာရှကျကိုကွညျ့ခိုငျတာ..”
“မပွောလို့ရမလား မငျးက အညှီအဟောကျဆို နှားမဒနျမှရူးရူးပေါကျသလိုပွောခငျြနတေဲ့ကောငျကို..”
တဈယောကျတဈပေါကျပွောဆိုရငျကြှနျတျောတို့ ဘျောဒါတှရေဲ့ ညနခေငျး လကျဖတျရညျဆိုငျပနျခြီးကာလေးသညျ အသကျဝငျလို့နေ၏…
အျောသံဟဈသံ ဆူညံသံမြားကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့လဲ ကားတိုကျသညျ့နရောကိုအပွေးရောကျသှာကွတယျ…
“မငျးကလဲ မကျြနှာကွီးဒီလောကျရုပျပကျြဆငျးပကျြဖွဈနတော တနှာကထခငျြနသေေး…”
ဒီကောငျပွောလဲပွောခငျြစရာ မကျြနှာကရုပျပကျြဆငျးပကျြဖွဈနသေောလဲ လှပတဲ့ အကှေးအညှနျ့မြားနဲ့ ရေးဆှဲထားတဲ့ သူမခန်ဓာကိုယျလေးကိုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ လှတပတ ကောငျမလေးတဈယောကျဖွဈမှနျသိနိုငျ၏..
လူကွီးတဈယောကျအျောသံကွောငျ့ အားနဆှေမျးကွီးဝိုငျးလောငျးဖို့ ဝါသနာပါတဲ့သူတှတေိတျသှားတယျ…
သှေးအိုငျထဲတှငျလဲနတေဲ့ကောငျမလေးကိုကွညျ့ရငျ သနားဂရုနာသကျနကွေသလို ကားကိုသောကျရမျးမောငျးတဲ့ တကောငျ့သားကိုတော့ မတ်ေတာတှအေတုံးလိုကျအတဈလိုကျဝိုငျးပို့ကလြေ၏…
“ဟိုမှ ရဲတှရေောကျလာပွီ..သှားမထိကနြဲ့ ဘေးဖယျနကွေ….”
ရဲတှရေောကျလာပွီ ရဲလုပျငနျးလုပျစရာရှိတာတှလေုပျပွီ ဆေးရုံကားနဲ့ အလောငျးကို ဆေးရုံသယျသှားတဲ့အခြိနျထိ လူတှကေမစဲသေးပဲ တဈယောကျတဈပေါကျပှစိပှစိနဲပွောလိုမဆုံးသေး..ကြှနျတျောတို့လဲ လကျဖကျရညျဆိုငျဆကျမထိုငျခငျြတော့တာနဲ့ လမျးခှဲပွီ အိမျပွနျလာလိုကျကွတယျ…သတိတခကျြအလှတျမှာ လူသားတဈဦး ဘဝစတသှေားခဲ့ရပွီကော….
“ဒီလိုလကှော ဟိုတဈလောကဆိုငျကယျတိုကျတဲ့နရောမှ သရဲခွောကျလို့တဲ့…”
“ဟုတျတယျ…ညဘတျဆို ကောငျမလေးတဈယောကျ အဲ့ဒီနရောနားမှ လမျးလြှောကျလြှောကျနတော တဈခြို့လူတှတှေတေ့ယျတဲ့…”
“ငါပွောတာမဆုံးသေးဘူးလကှော..တှတေ့ော့ တဈခြို့က ညငှကျထငျပွီးသှားချေါတော့ စုတျပွတျသကျနတေဲ့မကျြနှာကွီးနဲ့ လှညျ့လှညျ့ကွညျ့တယျတဲ့…”
“ဟ..မငျးနတေဲ့နရောကနေ ဒီလကျဘတျရညျဆိုငျကို အဲ့နရောကနဖွေတျလာမှရတာလကှော…”
ဆကျထိုငျခငျြစိတျမရှိတာနဲ့ ဘျောဒါတှကေိုနှုတျဆကျပွီ အိမျကိုစောစောပွနျလာလိုကျတယျ…အိပျတော့လဲ မကျြလုံးထဲမှာ ဆိုငျကယျတိုကျတဲ့ အဖွဈအပကျြကိုမွငျရောငျနမေိတယျ…
“ခဏနလောမှပေါ့..ဟော့ပွောရငျဆိုရငျ လာပါပွီ..နောကျမှလဲ ကောငျမလေးတဈယောကျတငျလို့ပါလာ..ဘယျတုနျးကဆျောရသှားတာလဲမသိဘူး..”
တကောငျ့သားကဒီကိုတညျတညျမလာပဲ လကျဘတျရညျဆိုငျနဲ့မကျြစောငျးထိုးက ကှမျးယာဆိုငျမှာကှမျးကဝငျဝယျနသေေး….
လကျဖတျရညျ ကစျြိမျ့ကိုမော့ပွီ ဆေးပေါ့လိမျဖှာကာ ဖတျလကျစစာအုပျတဈအုပျကိုဆကျဖတျနလေိုကျတယျ…
“နညေိုတာနဲ့ လပြေို့တာမို့ ငါကိုယျတျော ရှရေညျ နညျးနညျးကဈလာတာပါ..ဟဲ…ဟဲ..”
“ဘယျကကောငျမလေးလဲ မပါ ပါဘူးကှ.ငါတဈယောကျတညျးလာတာပါ…”
ကြှနျတျောတဈယောကျတညျးဖွဈနတောလာဆိုပွီ ကနျြတဲ့သူတှကေိုကွညျ့တော့ သူတို့မကျြနှာတှမှော မမေးပဲ ကြှနျတော့လိုပဲခံစားနရေတာသိသာနတေယျ…
တဈယောကျကိုတဈယောကျစကားလဲမပွောဘူး ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့နဲ့..ကိုယျ့ဆရာကတော့ တဈယောကျတညျးလှတျနတော…
ပွောပွီပွနျသှားတဲ့ ဒီကောငျ့ကိုကွညျ့ပွီးသကျပွငျးခမြိတယျ…တဈခုသတိထားမိတာက ဒီကောငျပွနျသှားတာနဲ့ ကြှနျတျောတို့ထိုငျနတေဲ့ဝိုငျးလေးက ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားတာပဲ…
မိုးလငျးမယျကာမကွံသေးဘူး ချေါသံကွောငျ့ အိပျခငျြမူးတူးနဲ့ကွညျ့လိုကျတော့..
“ဘာလဲ သူရ ရာအစောကွီးရှိသေးတယျ…”
“အစောကွီးတှဘောတှလေုပျမနနေဲ့ စံလငျးနိုငျတို့ အိမျကိုသှားမယျ..”
“ငါလဲသခွောမသိဘူး.သူ့အဖကေတော့ မနကျအစောကွီးပယောဂဆရာသှားပငျ့တယျတဲ့..သူအမကေ ငါတို့ကိုလာခဲ့ပါဦးဆိုပွီ ဖုနျးဆကျလို့…”
ကြှနျတျောလဲ မကျြနှာသဈ အဝတျအစာလဲပွီ အဒျေါကိုပွော၍ သူရ နဲ့လိုကျလာလိုကျတယျ…
“အဒျေါ စံလငျး ဘာဖွဈလို့လဲ..”
“မသိပါဘူး သားတို့ရယျ…တဈညလုံး ဘာတှပွေောမှနျလဲမသိဘူး ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့..”
“ပရိတျရတေိုကျထားတော့ နညျးနညျးငွိမျနတေယျ သှားကွညျ့လိုကျပါဦးသားတို့သူငယျခငျြးကို သူ့အခနျးထဲမှာ..”
ပွောပွီ စံလငျး အခနျးထဲကိုသှားကွညျ့လိုကတော့ ကိုယျ့ဆရာက အလှနျကွောကျရှံ့နတေဲ့မကျြနှာနဲ့ အခနျးဒေါငျ့မှ ငုတျတုတျလေး..မကျြလုံးလေးကလဲ ကလညျကလညျနဲ့…စိတျနဲ့လူနဲ့လဲကပျတဲ့ပုံမပျေါဘူး..
“စံလငျး ဘာဖွဈတာ ငါတို့ကိုပွော..”
“ဘာဖွဈတာလဲ မငျးပွောမှ ငါတို့ဘာလုပျပေးရမယျမှနျသိမှာပေါ့..”
“ငါ…ညက မငျးတို့ဆီမလာ….ခငျ လမျးထိပျကဆိုငျမှာ အရကျဝငျသောကျတယျ…..ပွီး…ပွီး…တော့…”
“ပွီးတော့ မငျးတို့ဆီလာရငျ ဆိုငျကယျတိုကျတဲ့နရောလဲရောကျရော ဟိုနကေ့မငျးတို့ပွောတာသတိရလို့ ဆိုငျကယျရပျပွီ ဒီမှရှိတယျဆိုတဲ့ မျောဒယျသရဲမလေး ပငျြးနရေငျကိုယျနဲ့လိုကျခဲ့လို့ပွောလိုကျတယျ….”
“ငါလဲအယုံအကွညျကလဲမရှိ မူးကလဲမူးနတေော့ချေါခဲ့လိုကျမိတာ..ငါချေါတဲ့စကားလဲဆုံးရော ငါ့ဆိုငျကယျနောကျကိုလူတဈယောကျတကျလိုကျသလိုဖွဈသှားတာ
ငါသိလိုကျတယျ.ဒါပမေဲ့ အမူမဲ့အမှတျမဲ့ပဲနပွေီ မငျးတို့ဆီလာခဲ့တာ…”
“ဒါဆို ငါတို့မနညေ့က မငျးဆိုငျကယျနောကျမှတှလေိုကျတာက…”
“အဲ့အထိ ဘာမှမဖွဈသေးဘူး..ငါအိမျပွနျလာတော့ လမျးမှခှေးတှကေ ငါကိုကွညျ့ပွီးတော့ကိုထိုးအောငျတာ..ငါ့စိတျထဲမှာလဲ ဆိုငျကယျနောကျမှတဈခုခုပါလာတယျဆိုတာသိတယျ..ဘာလုပျရမယျမှနျမသိလို့ဒီအတိုငျပွနျလာပွီ အိပျနလေိုကျတာ..ငါ….ကို အဲ့သရဲမက လညျပငျညဈတော့တာပဲ…
ရုပျကွီးကလဲ ဆိုငျကယျတိုကျတဲ့နကေအတိုငျပဲ သှေးတှနေဲ့ ဆံပငျတှကေလဲ ဖရိုဖရဲနဲ့ကှာ….ငါ့အျောသံကွားလို့ အမရေောကျလာပွီ ပရိတျရနေဲ့ ပတျလိုကျမှာပြောကျသှားတာ…”
“သူ…သူ….ရှိနတေယျ ဒီအခနျးထဲမှာ ငါသိနတေယျ…တဈခကျြတဈခကျြငါမွငျနရေတယျ….ဆံပငျဖားလြှာနဲ့ ရုပျပကျြဆငျးပကျြကွီး…သှေးတှသေံတှနေဲ့..မကျြလုံးတဈလုံးကအပွငျကိုထှကျနတေယျ
ကြှနျတျောတို့လဲဘာလုပျရမယျမှနျမသိ..စံလငျးကအခနျးထဲမှာသရဲမရှိတယျဆိုတော့ ကြှနျတျောနဲ့ သူရ ကွကျသီးတှထေပွီး ရှိရှိသမြှအမှေးတှပေါအကုနျထောငျကုနျတယျ..နောကျခဏလောကျနတေော့ စံလငျးအဖနေဲ့ ပရောဂဆရာရောကျလာပွီ လုပျစရာရှိတာတှလေုပျပွီ သရဲမကိုစချေါတော့တာပဲ…
“ဥုံ…………………..ငါဆရာအမိနျ့နာခံ ဒီအိမျမှာ နှောငျ့ယှကျနတေဲ့ သရဲမ ခုငါ့ဆရာရှေ့ ထှကျခဲ့…..”
အိမျအပွငျမှာကော ခွံအပွငျမှာပါ လူတှကေလဲ ဘာဖွဈသလဲဆိုပွီ ဝိုငျးပွီးစပျစုနကွေတာကွိတျကွိတျတိုး….
လူကွားထဲမှာကွညျ့နတေဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ သရဲမဝငျပူးပါလရေော…
“ဟိတျ …သရဲမ ငါဆရာအမိနျ့နာခံစမျး.. နငျဘယျသူလဲ..ဘယျကလဲ..ဟိုတဈလောကဆိုငျကတိုကျသတေဲ့ကောငျမလေးလာ…”
“သွျော..နငျက အယောငျဆောငျပွီး ခွောကျလှနျ့နတောပေါ့..ခုပွနျကိုယျနတေဲ့နရောကိုယျပွနျ…”
ပွောပွောဆိုဆို ပရောဂဆရာက ကွိမျလုံးနဲ့ဆျောတော့တာပါပဲ..သရဲမတော့မသိဘူး…ဘေးနားကကွညျ့နတေဲ့သူတှတေောငျ ကောကောသှာတယျ
ပွောပွီ ဖယောငျတိုငျးတဈတိုငျကိုကိုငျကာ ဘာတှရှေတျဘာတှမေနျးနလေဲမသိဘူး.ပွီတော့ ဖယောငျတိုငျကိုထှနျးတော့တာပဲ..ဖယောငျတိုငျထှနျးတာနဲ့တပွိုငျနကျ..
“နငျကကောငျးကောငျးပွောလို့မှမရတ..ငါ့မိနျ့ကို နာခံပွီ ငါပွောတာလုပျရငျလှတျပေးမယျ…”
“ဒါဆိုခုနငျဝငျနတေဲ့ ကောငျမလေးကနခှေါပွီ ကိုယျ့နရောကိုယျပွနျ ဒီအိမျကိုလဲလုံးဝအနှောငျ့အယှကျမပေးနဲ့…ကိုယျနတေဲ့နရောမှလဲ အနှောငျ့အယှကျမပေးနဲ့ ကွားလာ…”
ပရောဂဆရာလဲ သရဲမဂတိပေးတော့ လုပျစရာရှိတာပွောစရာရှိတာပွောပွီ လှတျပေးလိုကျတယျ..နောကျတော့အဲ့အိမျမှာကော ဆိုငျကယျတိုကျတဲ့နားမှပါ သရဲမခွောကျတော့ပါဘူး…